Ogaden News Agency (ONA) – Soomaali Argagixiso Looga Shakiyay oo Australia Lagu Xidhay.
Soomaali Argagixiso Looga Shakiyay oo Australia Lagu Xidhay.
Posted by ONA Admin	/ November 29, 2017
Ciidanka booliiska Australia ayaa xidhay nin ay ku eedeeyeen in uu qorshaynayay in uu qaado fal argagixiso marka ay magaalada Melbourne ka billowdaan munaasabadaha lagu xusayo sannadka cusub ee foodda inagu soo haya.
Wiilkan 20 jirka ah ayaa lagu soo oogi doonaa dacwado argagixiso kuwaas oo uu ku mutaysan karo xabsi daa’in, sida ay masuuliyiintu sheegeen. Booliiska ayaa ku eedeeyay in ninkan uu qorsheeyay in uu dadka ku toogto fagaaraha Federation Square oo ku yaalla bartamaha magaalada isaga oo adeegsanaya qori darandoori u dhaca.
Booliisku waxaa kale oo ay sheegeen in aysan hadda jirin halis ku soo fool leh dadwaynaha. Masuuliyiintu waxay sheegeen in ninkan uusan haysanin hub darandoori u dhaca marka ay ku xidheen Melbourne Isniintii.
Sannadkii hore 500,000 oo ruux ayaa sannadka cusub ku soo dhaweeyay badhtamaha magaalada Melbourne. Patton wuxuu sheegay in wiilka laga shakisan yahay uu ku dhashay Australia waalidkiina ay Soomaali yihiin, booliiskuna ay la socdeen xaaladdiisa tan iyo bishii Janaayo.
Wuxuu tilmaamaha sida weerarrada argagixiso loo qaado ka helay Al-Qaacida isaga oo online ka helay, wuxuuna taageersanaa kooxda isku magacawda Dawladdda Islaamka, sida ay booliisku sheegeen. Patton wuxuu sheegay in wiilku uu xidhiidh la lahaa argagixiso balse aysan cidna ku wehelinin qorshahan. Mana jirto cid kale oo lala xidhay.
Dawladda ayaa jartay waraaq fasax ah oo lagu baadhayo gurigii uu wiilku daganaa, ganacsiyadii uu ka shaqeeyay iyo guryaha dadkii ay qaraabada ahaayeenba. Xidhitaanka ayaa lala xidhiidhinayaa hawlgallo horay loo sameeyay sida ay booliisku sheegeen.
Sannadkii horana booliisku waxay sheegeen in ay fashiliyeen weerar argagixiso oo wayn oo la rabay in la fuliyo ciiddii Masiixiyiinta ee Christmas-ka, waxaana la sheegay in meelaha lagu bartilmaameedsan lahaa ay ka mid ahaayeen fagaaraha Federation Square. Booliiska Australia ayaa 74 ruux dacwado argagixisanimo ku soo oogay tan iyo sannadkii 2014kii, markaas oo heerka macquulnimada in ay falal argagixisanimo dhacaan sare loo qaaday.